BAREFOOT...!!!: "सभ्य" काठमान्डुका "खतरनाक" सिद्दान्त
"सभ्य" काठमान्डुका "खतरनाक" सिद्दान्त
काठमान्डुका राम्रा न नराम्रा पक्षका बिषयमा लामै बहस होला, त्यो मेरो काम होइन, विद्वानहरुले गर्नुहुन्छ । यहाँ भनिएको काठमान्डौ काठमान्डौ उपत्यकाको खाल्डो हो, जस्मा आजसम्मको भोगाइमा मैले देखेका अन्त नपाईने या कम पाइने 'युनिक' सिद्दान्त र नियमहरु छन् । कसैलाई घोच्नु या ठुलो मान्छे बन्नु मेरो उद्देश्य होइन, जे देखें, त्यही लेखेर पोस्ट गर्देको मात्रै ।
काठमान्डुमा भेटिने केही "डेड्ली" नियम र सिद्दान्तहरु :-
Footpath sale supermarket image : httpallysonjohnson.comtagkathmandu
१) सडकपेटी बटुवाको लागि होइन । यो त निर्माण सामाग्री थुपार्ने र सिमेन्ट रड घोल्ने ठाउँ हो । त्यस्बाट बचेँका ठाउँहरु सधैं हतार भैरहने मटरसाइकल कुदाउनका लागि हो । सडकपेटी नाथेमा यसै पनि मान्छे हिंड्न हुन्न, सडक हुँदा हुँदै को हिंडोस् ?
२) आकाशेपुल बाटो पार गर्न बनाइएको होइन, यो त त्यहाँ बसेर शहर हेर्न र पानी जमेको बेला हिंड्न बनाइएको हो, अरुबेला त्यस्को कुनै काम छैन, चिल्लो सडक (भएदेखि) बाटै हिंड्नपर्च ।
३) सडकपेटिमा पसल थाप्नु हरेक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो, यो कसैले खोस्न सक्दैन । नगरपालिकाको "खैरे" पुलिस आएसी कुम्ला टिपेर भागन सक्ने हुनु बाहेक कुनै योग्यता चाहिन्न यो कामको लागि ।
४) सवारीको हर्न बजाइरहने चीज हो, अझ अस्पताल या स्कुल, कलेज, अफिस अगाडि पुगेपछी बेस्सरी हर्न थिच्यो भने ठुलो मान्छे भैन्छ र भित्र रहनेलाई फोकटको मनोरन्जन हुन्छ । साथै, अगाडिको गाडी नै गाडी या ठुलै जाम भए पनि हर्न थिचेसी गाडी उड्न थाल्छ र बाटो खाली हुन्छ ।
५) सडक विद्यार्थी संगठन र अरु भुस्तिघ्रेका साथै डलर खेती किसानी गर्नेहरुको 'बापका माल' हो, उनीहरुको निगाह भएका दिनमात्र खुल्नेगरी 'लिज'मा दिइएको, जहाँ उनीहरु चाहिएको बेला निस्केर रमिता गर्न सकुन् ।
६) पुलिसको काम वाल्ल परेर घाममा बस्ने, सवारीका बेक्ला मान्छेहरुलाई अपशब्द बोल्दै घोक्राउने र जस्ले जुलुस निकाले पनि "स्कर्टिङ" गर्ने हो । साथै बन्द गर्न सहयोग गर्ने काममा पनि पुलिस दाजुभाइको 'खतरनाक' भूमिका हुन्छ । जनताको शान्ति सुरक्षा आँफैं गर्नपर्छ, त्यस्ता नाथे काम गर्ने फुर्सद पुलिसलाई छैन ।
Micro Trips at kathmandu : source :( httpchandledevor.blogspot.com2007_07_01_archive.html)
७) मोटरसाइकल भन्ने जिनिस शहरका सबैभन्दा "भीभीआइपी" जिनिस हुन्, जताबाट जुन गतिमा लगेपनि हुन्छ, जाममा रोक्ने फुर्सद हुन्न । कसैले केही भन्यो भने यस्सो छड्के परेर 'ड्यासिङ' लुक दिए भैहाल्यो ।
८) कपडाको लम्बाइ बढाउने, मोबाइल चेक् गर्ने या कार्ड चेक् गर्ने गरेपछि स्कुल कलेजमा "खत्रा" पढाई हुन्छ, गतिलो पढाउने मास्टर खोज्नु, या पाठ्यक्रम सुधार गर्ने लगायतका काम बेकार हुन् ।
९) कालोबर्णका र तराइमुलका सबै "इन्डिएन", "धोती" या "भैया" हुन्, दोश्रो श्रेणीका नागरिक, तिनिहरु इन्डियाबाट ठग्न नेपाल आएका हुन्, तिन्लाई जे भनेनी हुन्छ । तिनिहरुसँग "हे' लगाइ लगाइ सकी नसकी हिन्दी बोल्नुपर्छ ।
१०) बिहान दिउँसो बेलुका हिन्दी गीत सुन्ने, फिल्म हेर्ने र सबैथोक उतैको खाइपीइ गरेर चर्का स्वरमा भारतलाई गाली गरेसी "राष्ट्रबादी" भैन्छ, नत्र "नो चान्स" ।
११) कर जनताको लागि हो, त्यही भएर काठमान्डुमा कर तिर्नु खासै पर्दैन, यसै नि जनताले नै पाउने हो, आँफैं राख्न पर्छ । तर चर्को स्वरमा देश किन बिकास हुन्न भनेर प्रबचन दिन पाईन्छ, कसैले छेक्न सक्दैन ।
१२) ५-७ वटा पसल या ब्यापार अथवा ५-७ ठाउँबाट तलब खाएपनी एक ठाउँको आम्दानी देखाएर कर तिर्ने हो । "बेसिकल्ली" कर भनेको तिर्ने चीज नै होइन, छल्ने जिनिस हो ।
१३) नगरपालिकालाई गाली गर्दै फोहोर जहाँ फालेपनि हुन्छ । पान खाएर सडकमै थुक्नुपर्छ अनि बल्ल आनन्द आउँछ । जंक फुडका बोक्रा लगायतका फोहोर सडकमै फाल्दिने हो, डस्ट बिनहरु देखाउनका लागि राखिएका हुन् । अझ लुसुक्क नदेख्नेगरी गएर अर्काको शटर अगाडि फोहोर थुपार्दिन सक्नेहरुलाई त स्वर्गानुभुति हुन्छ, कुरै छैन ।
Cows on the road of Kathmandu, image : httpwww.ekantipur.comthe-kathmandu-post20120828related_articlesanimal-deaths-on-road-who-is-to-blame238937.html
१४) चाडबाड भनेको सडकमा मनाउने चीज हुन्, चाडबाड मनाउन जुलुस निकाल्न पर्छ ।
१५) अर्कालाई सकस दिनेगरी पब्लिकमा चुरोट नखाए "कूल ड्युड" या नेपाली नागरिक भैन्न । फिटिक्कै ।
१६) माइक्रो भन्ने डब्बामा जति पनि मान्छे हाल्न पाईन्छ, जता फर्काएर जसरी कोचे पनि पाईन्छ, ति सबै 'सिट'हरु हुन् ।
१७) सडकका खाल्डाखुल्डी अरुलाई हिलो छ्याप्न बनाइएको हो, त्यसै पनि हिलो छ्याप्नु हाम्रो मुख्य पेशा हो ।
१८) सरकारी कर्मचारी सबै कामचोर र घुष्याहा हुन्, करोडौं कमाउछन् । बाँकी सप्पै ज्ञानी हुन्, फटाफट काम गर्छन् ।
१९) कसैको गलत कुरा देखाउनु नकारात्मक हुनु हो, त्यसले कनेर भएपनि उल्टापाल्टा कामलाई सकारात्मक भन्नु पर्छ, त्यसो भएसी देश 'नाथे' त्यसै बिकास हुन्छ र बुद्धिजीबी बर्गमा गनिन त यो क्वालिटी नभै हुन्न ।
२०) शहरीया हुन कनेर घाँटिको किल्किले नचाएर "आँच" गर्दै मोडर्न बोल्नुपर्छ, कब्जीयत भएर गोटा परेको बेला जस्तो कन्दै पुराना स्रस्टाका गीतको "माँ बेहेन" गर्नु नयाँ पुस्ताको कर्तब्य हो ।
२१) मोबाइल अफ गर्नु भनेको ठाउँमा ठुलो स्वर "मुन्नी बदनाम हुइ" या "शिलाकी जवानी" को रिङ्गटोन बजेपछि ठुलो मान्छे भैन्छ ।
२२) शहरमा पुरुषले महिलालाई केही भन्यो भने मात्रै भेदभाब हुन्छ, महिलाले चिच्याइ चिच्याइ पुरुषलाई सरापे पनि भेदभाब हुन्न । त्यस्तै बाहुन या कथित माथिल्लो जातले जातभातका कुरा गर्नु छुवाछुत हो, कथित तल्लो जातले त "टपरी" आदि इत्यादी भनेर सराप्दा नि जातीय भेदभाब फिटिक्कै हुन्न ।
२२) कुनै दुकानदारले पनि मूल्यसूची टाँस्नु पर्दैन, यो सरकारको काम हो । सामान आफुलाई मन लागेको लेबल टाँसेर बेच्दा भयो ।
२३) सरकारी अफिस एक दिन बढी बन्द गरेर सबै आफ्ना भरौटेहरुलाई लाइसेन्स दिएपछि देशको लोडसेडिङ घटेर स्वाहा हुन्छ ।
२४) बैकबाट सक्दो लोन लिएर टाइसुट लाएर बिदेसी सामानको दलाली गरेपछि उध्योगपति भैन्छ, लोन तिर्नु पर्दैन के भो र ?
२५) टोल टोलका बेकामेहरु सब 'डन' हुन्, सिधै 'माथि' कनेक्सन भएका, सर्बसाधारण हरुले उनिहरुको नियम मान्नुपर्छ ।
२६) पत्रकारहरुलाई केही भन्न हुन्न, दुर्व्यबहार हुन्छ । पत्रकारले जे लेख्दे नि हुन्छ, त्यो 'प्रेस स्वतन्त्रता' हो ।
२७) बिहा गर्दा सबैलाई डिस्टर्ब गर्नुपर्छ, जेनेरेटर चलाएर भएपनि रात बिरात हुलदंगा गर्नुपर्छ, अनि पो शहरीया भैन्छ ।
२८) ताइ न तुइका बाङ्गाटिङ्गा धेरै जसो कहिले कर नतिर्ने साइनबोर्ड राखेर बचेँको जति ठाउँ अनाबस्यक नेपाली फिल्मका पोस्टर टाँस्न र कहिले पुरा नहुने नारा लेख्न हो, यस्मा तिन्कै 'कपीराइट" छ । पोस्टर जता फर्काएर जसरी टाँसे नि हुन्छ ।
२९) सहरमा भएका सबैजसो तन्दूरी रोटी पसल "लुम्बिनी" हुन्, भट्टी चाँही आमाको, दाजुको, दिदिको, फलानाको हुन्छन् ।
३०) शहरमा भएका बस बिसौनीहरु पोस्टर टाँस्न, पानी परेका बेला मान्छे ओत् बस्न र सडक बालकहरु सुत्न बनाइएका हुन्, मान्छेहरु त्यहाँ चढ्नु र ओर्लिनु हुन्न । ढोका अगाडिबाट चढेर भनेकै ठाउँमा ओर्लिनुपर्छ !
३१) सरकारी क्याम्पसहरु फिरिमा कबिता सम्मेलन र पार्टिका भातृ संगठनको भेट्घाट गर्ने ठाउँ हुन्, बिदाका दिन त त्यस्ताको भीड हुन्छ त्यता । पढाई नभए पनि बाल हो ।
३२) काठमान्डु बन्द गर्न सबैभन्दा सजिलो शहर हो, जस्ले गर्दिए नि बन्द हुन्छ । आजकाल त १ घण्टे, २ घण्टे, ४ घण्टे फेसन छ यतातिर ।
Movie posters on wall of Kathmandu (image by : httpwww.maxdrukpa.com201203photo-leftovers-from-nepal )
३२) बाटो काट्नेहरु सब "स्पाइडरम्यान" हुन्, उनीहरुले ट्याँस्स हात तेर्साइदेसी गाडी रोकिनुपर्छ !
३३) पिसाब जता फेर्दे नि हुन्छ, मान्छे बेस्सरी जम्मा हुने ठाउँबाहेक कुनाकाप्चा सब यी "खुली हवा"वालाहरुबाट अतिक्रमित छ ।
३४) पसलमा गयो भने भन्ने र दिने मुल्य आकाश पाताल् हुन्छ । २०% डिस्काउन्ट त सिधै मिल्काउँछन् धेरैजसोले । जसरी नि बेच्न पाइनु यस्ता ब्यापारीहरुको संबैधानिक अधिकार हो ।
तपाईं सक्नुहुन्छ भने थप्नुस् कमेन्टमा, बादबिबाद र गाली गलौज मेरो अभिप्राय होइन ! सभ्य बन्नु जरुरी छ, साना कुराबाट संसार परिवर्तन हुने हो !
मेरो सिसाकलम January 4, 2013 at 4:55 AM
सभ्यताको सुरुवात हामी आफैंबाट गरौं न
Smnp January 5, 2013 at 8:25 PM
Ma sansar ko jun kuna ma basdai chhu , yaha vehicle ko horn ko meaning mistake garnelai warning hunchha, tesaile horn ko sound rarely matra Sunna paainchha,
Aaphu base ko city ko cleanliness le tayha basne har ek byakti ko savyata ko pahichan garauchha, tesai le kasaile na dekhne gari faliyako fohar bhannu nai aakash tira here ra thuknu jastai ho, tyo antya ma aaphnai mukh ma parchha,
korean ra Hindi series herne sabai lai thaha chha INDIA & KOREA ko status world ma Kun position ma chhan bhane ra?? Hair colour gare ra hair style change gardai ma & sari ra jewellery ko siko gardai ma Nepal ko status world ma K&I ko jasto hudaina , tesai le ek palta self esteem gare herau aaphu kaha chhu bhanera,
Internet k garna use gardai hunuhun chha?? Face book ma pic upload garna/ every day status change garna/ aruko pic n status ma like garna / chat garna tyo pani unwanted kuraa haru ko ki U tube ma j payo tei Herna ?? Internet ko kaam teti matra hudaina yo sabai gare ra pani kunai knowledgable site ko ni visit garne garnus world lai bujhne chance paaunu hune chha, even in Face book dherai janna parne kuraa haru share garirako hunchha , choose garna try garnus Kun usable / fruitful chha bhanera
Aru dherai kuraa chhan jaann parne but sanai kuraa bhayani aaphai bata suru garau , practically kaam gari teslai continuation dina try garau ..., :)